ဒိုးမယ္ရဲ႕ Feature အသစ္ Gamification ဆိုတာ??? - ဒိုးမယ်
ဒိုးမယ္ရဲ႕ Feature အသစ္ Gamification ဆိုတာ???
ဒိုးမယ် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဆိုတာက အစားအသောက်ချစ်သူတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်တွေ၊ လူအနည်းစုသာ သိသေးတဲ့ ဆိုင်နေရာကောင်းများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Version အနေနဲ့ Beta Version ဖြစ်ပြီး Android ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
သြဂုတ်လ ၇ရက်နေ့က စတင်ပြီး Feature အသစ်ဖြစ်တဲ့ Gamification ကို ဒိုးမယ် အက်ပလီကေးရှင်း မှာ စတင်အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။ Gamification ဆိုကတော့ အက်ပလီကေးရှင်း မှာ ပါဝင်တဲ့ Features တွေထဲက တစ်ခုခုကို Action ပြုလုပ်တိုင်း ရရှိမယ့် အမှတ်တွေကို စုဆောင်းရမယ့် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Doemal ရဲ့ Gamification အနေနဲ့ ကတော့ Donut Point တွေ စုရမှာ ဖြစ်ပြီး ရရှိတဲ့ Donut Point တွေအလိုက် Gift ဘောင်ချာ၊ ပရိုမိုးရှင်း ကူပွန်တွေလဲလှယ်နိုုင်မယ့် ပျော်စရာ Feature တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Donut Point တွေကို ရယူနိုင်ဖို့ အတွက်ကတော့ ပထမဦးဆုံး ဒိုးမယ် အက်ပလီကေးရှင်းကို Update အရင် ရယူလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Doemal မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ Action ၉ခု ဖြစ်တဲ့
1. Like လုပ်ခြင်း
2. Comment ပေးခြင်း
3. Share လုပ်ခြင်း
5. Check in ပြုလုပ်ခြင်း။
6. Rating နှင့် Review ပေးခြင်း။
8. Error Report ပေးခြင်း။
9. သူငယ်ချင်းများကို Follow လုပ်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Like, Comment နှင့် Share ပြုလုပ်ခြင်း
ဒိုးမယ် မှာကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အစားအစာပုံတွေ၊ အခြားသူများ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို Like, Comment နှင့် Share ပြုလုပ်လို့ ရပါတယ်။ ပြုလုပ်ဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ Activity Feed ကိုသွားပါ။ Activity Feed ကို ဝင်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခြားသူတွေ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေကို မီဒီယာ ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုLike နှင့် Comment ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်Share လိုတဲ့ ပို့စ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေ သိရှိသွားအောင် Share ပေးလို့ရပါသေးတယ်။
Check in ၊ Rating နှင့် Review ပေးနိုင်ခြင်း။
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်နေရာကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို သိစေလိုလို့Check in တင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်စားခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို Rating နှင့် Review ရေးပေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒိုးမယ် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Check in၊ Rating နှင့် Review ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ ၃ နည်းရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ Home Page မှာ ရှိတဲ့ Search Box ကနေ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ ဆိုင်နေရာကို ရိုက်ရှာပြီး ပြုလုပ်တဲ့ နည်းလမ်း၊ Home Page မှာ ရှိတဲ့ အပြာရောင် Action Buttonကို နှိပ်ပြီး Check in၊ Rating နှင့် Review ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်း၊ ဘယ်ဘက် Draw Bar ထဲက Explore မှတဆင့် စားသောက်ဆိုင်ကို ရှာဖွေပြီးစားသောက်ဆိုင် Profile ရဲ့ ညာဘက် ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ Action Button အပြာလေးကို နှိပ်ပြီး Check in ၊ Rating နှင့် Review ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ အစားအစာဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေကို အမှတ်တရ အနေနဲ့လည်း ဒိုးမယ် အက်ပလီကေးရှင်းမှာ တင်လို့ရပါသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ Profile ထဲကတဆင့် အပြာရောင် Action Button ကိုဝင်ကာ Addaphoto ကိုရွေးချယ်ပြီး ဓါတ်ပုံများကို တင်လို့ရပါတယ်။
Error Report ပေးခြင်း
ကိုယ်ရောက်ဖူးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ Profile မှာ ဖုန်းနံပါတ်၊ လိပ်စာ၊ ဖွင့်ချိန်၊ ပိတ်ချိန် နှင့် အခြား အချက်အလက်တွေ လွဲမှားနေတယ်ဆိုရင် အပြာရောင် Action Button ကို နှိပ်ပြီး Error Report ကနေတဆင့် ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများကို Follow လုပ်နိုင်ခြင်း
ကိုယ်နဲ့အကြိုက်တူ အစားအသောက် ဝါသနာတူအချင်းချင်း ဒိုးမယ် အက်ပလီကေးရှင်းမှာ အပြန်အလှန် Follow ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Doemal အက်ပလီကေးရှင်း ကို အသုံးပြုနေရင်း ကိုယ်သွားချင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်နေရာအသစ်လေးတွေကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ရှာစရာမလိုအောင် Bookmark ပြုလုပ်ပြီး မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။
အခုပြောပြထားတဲ့ Action (၉) ခုကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ Donut Point တွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ Donut Point တွေကို ပျော်ပျော်ပါးပါးစုရင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှတ်တွေ ပြည့်လာတဲ့ အခါမှာ ကူပွန်တွေ၊ Gift ဘောင်ချာတွေ နှင့် လျော့စျေး တွေပေးနဲ့လဲလှယ်ပေးသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒိုးမယ် အက်ပလီကေးရှင်း ကို အသုံးပြု ပြီး အခုပဲ Donut Point လေးတွေကို စစုလိုက်ရအောင်။
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>Gamification
Wow !! Nice….